Mpikambana an-tendrombohitra 10 no maty, 7 no tsy hita tao amin'ny avalanche tampon'ny tampon'ny Mongolia
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Mpikambana an-tendrombohitra 10 no maty, 7 no tsy hita tao amin'ny avalanche tampon'ny tampon'ny Mongolia
Ny fatin'olona 10 izay tratry ny fihotsahan'ny avalanche teo amin'ny tampon'ny tampon'ny Mongolia, Otgontenger, dia nalain'ny mpamonjy voina, hoy ny masoivohon'ny fitantanana vonjy taitra nasionaly Mongolianina.
Mponina tendrombohitra fito hafa no tsy hita popoka. Vondronà mpihanika miisa 30, eo anelanelan'ny 30 sy 50 taona, no tratry ny horohoron-tany rehefa nidina avy teo amin'ny tampon'ny haavo 4,021 metatra ny alahady teo.
Ny asa famonjena, nahatafiditra olona 100 sy angidimby roa, dia naato tao Otgontenger noho ny haizina, fa hitohy ny talata izao.
Mankalaza ny Andron'ny Vehivavy Vietnamianina amin'ny alàlan'ny catwalk lamaody i Vietjet
Niverina tany Alaska i Cunard niaraka tamin'ny dian'ny mpanjakavavy Elizabeth tamin'ny 2019